राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारीमा केन्द्रीय सम्पर्क संयन्त्र | नयाँ शक्ति नेपाल
राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारीमा केन्द्रीय सम्पर्क संयन्त्र
७ भदौ २०७५
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको केन्द्रीय सम्पर्क संयन्त्र राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । संयन्त्र आगामी २०७५ पुससम्ममा अधिवेशन गर्ने गरी योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ ।
केन्द्रीय सम्पर्क संयन्त्रका इन्चार्ज इश्वर रिजालले पार्टी संगठनलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्यसहित सम्पर्क संयन्त्र अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘एक चरण हाम्रो संगठन लथालिङ्ग अवस्थामा थियो’, सम्पर्क संयन्त्र इन्चार्ज रिजालले भन्नुभयो, ‘पहिला अलग्गै पार्टी कमिटी भनिएको थियो । अहिले त्यसो नगरी सबै पार्टीमा नै जोडिने भन्ने भएको छ । म आएपछि वैशाखको १५ गते पहिलो वैठक राख्यौं । पहिलो बैठकमा पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराईसहित उपस्थित भएर सबै जिल्लाको एक/एक जना सम्पर्क व्यक्तिहरु जोड्ने निर्णय गर्‍यौं । बैठकले तीन महिनाभित्र जिल्ला संगठन बनाउने, ६ महिनामा नगरपालिका, गाउँपालिकामा बनाइसक्ने र पुसमा राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने खाका बनाएको छ । त्यसैअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं । अहिलेसम्म ६३ जिल्लामा सम्पर्क व्यक्तिहरु तोकिएको छ । २८ वटा जिल्ला भेला सकियो ।’
प्रदेश अधिवेशनको लागि दुई महिना समय थप
संयन्त्रले तीन महिनामा संगठन भेला गर्ने योजना बनाए पनि पूरा हुन सकेन । अहिले संगठन भेलाको लागि दुई महिना थप गरेको छ । ‘हामीले जिल्ला संगठनको भेला साउनसम्ममा गर्ने भनेका थियौं तर सकिएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन महिनामा हामीले संगठन भेला गर्न नसकेपछि भदौ र असोज दुई महिना थपेका छौं । केही जिल्लाबाट मानिसहरु सम्पर्कमा आउनुभएको छैन । हामीले एउटा योजना बनाएर गइरहेका छौं । हामीले भदौ र असोजमा जिल्ला भेला सक्ने, कात्तिक र मंसीरमा इलाका भेला सक्ने र मंसीरमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारी पनि गरेका छौं ।’
उहाँले प्रदेशको विधान निर्माणको काम पनि भइरहेको बताउनुभयो । ‘प्रदेशको लागि विधान कस्तो बनाउने भनेर सात वटै प्रदेशका व्यक्तिहरुसहितको सहभागितामा अन्तरिम विधान मस्यौदा परिषद् समेत बनाएका छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘काम भइरहेको छ । तीन–तीन महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक राख्ने भनेका छौं । आन्तरिक पार्टी पंक्तिमा कस्तो हुने ? प्रदेशको विधान कस्तो बनाउने ? यसको जिम्मेवारी कसरी सुनिश्चित हुने ? भन्ने बारेमा मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको छ ।’
संयन्त्रले काठमाडौं उपत्यकामा आएर पेसा व्यवसाय गर्ने ७४ वटै जिल्लाका व्यक्तिहरुलाई जोड्ने काम गर्दै आएको छ ।